आँचल शर्मा र उदिपलाई बच्चा कहिले ? भन्ने प्रश्न सोधेपछि आँचलले दिईन मुखभरिको जवाफ (भिडियो हेर्नुस) – Wow Sansar
January 19, 2021 137
काठमाडौं – अभिनेत्री आँचल शर्मा प्रेमी उदिप श्रेष्ठसँग विवाह बन्धनमा बाधिएको एक बर्ष हुन् लागेको छ। एक बर्ष अघि हिन्दू परम्परा अनुसार उनीहरुले बुढानिलकण्ठस्थित होटल पार्क भिलेजमा विवाह गरेका थिए। ‘हामी तीन जना हुंन समय लाग्छ’, श्वेता खड्का र विजयन्द्रसिंह रावतको रिसेप्सनमा आँचलले जिस्किंदै भनिन्, ‘पहिला पाँच छ वटा पार्टी खाउँ न । साडी सम्हाल्ने कि, ब्याग सम्हाल्ने कि बच्चा !’
‘नाइँ नभन्नू ल ४’ मा अभिनय गराउने टुंगो भए पनि निर्देशक विकास आचार्यको आँचललाई शर्त थियो, ज्यान घटाउनुपर्छ। सौन्दर्य प्रतियोगिता जितेर भीजे हुँदै फिल्ममा आएकी उनलाई ज्यान घटाउने पिर थियो। उनको यो चिन्तासँग परिचित थिइन्, मामाकी छोरी। उनले फेसबुकमा उदिपको प्रोफाइल देखाउँदै भनिन्, ‘यो केटालाई भन्नू न। खत्रा डाइटिसियन हो।’ आँचलले उदिपको फोटो हेरिन्।
बहिनीको दाबीमा सत्यता थियो। फेसबुकमा उदिपका एकसे एक तस्बिर थिए। तर, उनलाई आफैँ कुरा गर्ने हिम्मत थिएन। दिदीको बानी बुझेकी बहिनीले नै उदिपलाई आँचलको समस्या बयान गरेर लामो मेसेज लेखिन्। दुई दिनपछि उनले जवाफ दिए– ‘हुन्छ, म हेल्प गरुँला। मलाई कन्ट्याक्ट गर्नू भन न।’ बहिनीले आँचललाई उदिपको सन्देश फरवार्ड गरिन्। तर, लज्जालु स्वाभावकी आँचललाई आफैँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन गाह्रो लाग्यो। उनले बहिनीलाई अह्राइन्– ‘मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनू भन न।’ एक दिनपछि उदिपको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो। आँचलले स्विकारिन्। मेसेन्जरमा कुराकानी भयो। उदिपले डाइट प्लान गर्ने सूत्र बताइदिए। कुरा सकिएपछि आँचलको मनमा डाइटबाहेक एउटै कुराको सम्झना आइरह्यो, ‘ओहो, कस्तो मीठो बोल्ने मान्छे रहेछ !’
आँचलको कुरा सुनिरहेका उदिपले उनलाई ओभरटेक गर्दै भने, ‘तर, फस्ट टाइम भेट्दा कति समय बसेका थियौँ र ? जम्मा १५ मिनेट। त्यो पनि पूरा समय कारको ऐनामा हेरेर बितायो।’ ‘अनि के आफूलाई चाहिँ लाज लागेन त ?’ आँचलले उदिपलाई छड्के हेरेर मुस्कुराउँदै भनिन्। महिनादिनको योजनापछि आँचलले भेट्ने त भनिन् तर शर्त थपिन्– उदिपकै कारबाहेक अन्यत्र नभेट्ने। उदिपको सुर थियो– भेटेपछि कुनै रेस्टुरेन्टमा जाउँला र बसुँला।
तर, भेट भएपछि पनि आँचल आफ्नो कुरामा पक्का निस्किइन्। गैरीधाराको रेड मड क्याफेबाट गाडी चढेकी आँचललाई लिएर उदिपले एक फन्को लगाए र त्यहीँ छाडिदिए। त्यो समयमा पनि आँचलले उदिपलाई एकचोटि पनि नजर जुधाएर हेरिनन्। यो सन् २०१८ अक्टोबर ३१ को दिन थियो। तर, यही छोटो भेटले अनिगिन्ती भेटका लागि बाटो खोल्यो। भोलिपल्ट भेटेर तीनचार घण्टा सँगै बिताएका उनीहरूले त्यसयता भने काठमाडौँ र छेउछाउमा रहँदा एकअर्कालाई नभेटेको दिन छैन। कतिसम्म भने आँचल सुटिङका लागि धादिङ, भकुण्डेबेसीमा रहँदा पनि आधा घण्टाकै लागि सही, उदिप उनलाई भेट्न जान्थे। काठमाडौँमा रहँदा त उनीहरू दिनको एक चोटि भेट्ने रुटिन आजका दिनसम्म पनि तोडिएको छैन।
उतिबेला उदिपको प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि आँचललाई तत्कालै विवाह भइहाल्ला भन्ने लागेको थिएन। तर, विवाह गरेकी छिन्। ‘जन्म, मृत्यु र विवाह समयको हातमा हुन्छ भन्थे, हो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘बिवाह हुँदा हो रैछ भन्ने लागेको छ।’ उनलाई उदिपसँग विवाह हुनु अगाडी आफैँले भनेको अर्को एउटा कुराको पनि सम्झना हुन्छ। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा विवाहका लागि जोसुकै पनि परोस्, तर नेवार र डाक्टर चाहिँ कहिल्यै नपरोस् भनेकी थिइन्।
‘भूकम्पको बेलामा म बस्ने टोलका एक जना नेवारसँग ठाकठुक परेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले मैले त्यो अन्तर्वार्तामा बिहे गर्ने केटो नेवार नपरोस् भनेकी थिएँ। त्यो मेरो कच्चा टिप्पणी थियो, जसमा मलाई खेद छ। अहिले नेवार र डाक्टरसँगै जिन्दगी बिताउने संयोग जुराइदिएर भगवान्ले मसँग मीठो बदला लिएका छन्।’
Prevअचम्म को दुनियाँ : छोरासँग बिहे गरेर आमा बन्दै छिन यी महिला ! – भिडियो सहित
Nextतिमीले बच्चाको अनुहार पनि देख्न पाउँदिनौ, तिम्रो मृत्यु हुन्छ भनि डाक्टरले ९९ प्रतिसत आस मारेको बच्चालाई आमाले काखमा समातेर राख्न पाउँदा
चुनाव लड्ने रमेश खरेलको घोषणा [भिडियोसहित]